गण्डकी प्रदेशमा एमालेले फेरि बनायो यस्तो सरकार, कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित) - Nepalese Times
माओवादीले तोक्यो ३२ विभागका प्रमुख, कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित) 18 मिनेट अघि
गण्डकी प्रदेशमा एमालेले फेरि बनायो यस्तो सरकार, कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित)
नेप्लिज संवाददाता ३० श्रावण २०७८, शनिबार १८:३३ (2 महिना अघि) २०६ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । साढे तीन वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशमा छायाँ सरकार बनेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि ११ वटा मन्त्रालय बनाएकाले एमाले संसदीय बोर्डको बैठकले ११ मन्त्रालय हेर्ने गरी ९ वटा संसदीय समूह बनाएको गण्डकी प्रदेशका एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए ।
प्रदेशमा ११ मन्त्रालय भए पनि ९ समितिले ११ वटा मन्त्रालयमा हुने गतिविधिहरूलाई निगरानी गरी प्रतिपक्षको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समूह बनाएको बनाईको उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार, विकास तथा यातायात मन्त्रालयका गतिविधिको निगरानी गर्नका लागि पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई संयोजक बनाइएको छ ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निगरानीका लागि पूर्व मन्त्री विकास लम्साललाई संयोजक बनाइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको संयोजकमा नरदेवी पुन मगरलाई चयन गरिएको छ ।
त्यसै गरी पछिल्लो सरकार गठन भएपछि बनेका नयाँ कानुन, सूचना सञ्चार, प्रदेश मामिला मन्त्रालयको संयोजक चन्द्र मोहन गौचन बनेका छन् ।
भूमि, व्यवस्था,कृषि मन्त्रालयको संयोजकमा मित्रकुमारी गुरुङ चयन भएका छन् ।
ऊर्जा, खानेपानी मन्त्रालयको संयोजकमा मीनप्रसाद गुरुङ चयन भएका छन् । सदस्यमा धनञ्जय दवाडी चयन भएका हुन् ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका–७ मा नायब बहादुर शाहको पूर्णकदको सालिक अनावरण गरिएको छ । वाग्मती प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत नायब बहादुर शाहको सालिक निर्माण गरिएको हो । सालिकको वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले आज अनावरण गरे ।
सो अवसरमा उहाँले अन्यायमा परेको ऐतिहासिक पात्रलाई सम्झेको दिनका रुपमा आजको दिनलाई आफूले लिएको बताए । “असल काममा लाग्दा विरोध र विवाद हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण बहादुर शाह बन्नुभएको छ, समाजमा असल काम गर्नेको खुट्टा तानेको देखिन्छ, बहादुर शाहले पनि त्यस्तै नियति व्यहोर्नुभयो”, उनले भने, “नेपाल एकीकरण अभियानलाई तेब्बर बनाएर पनि उनले न्याए पाएनन् ।
मन्त्री फुयाँलले सम्पदा मैत्री विकास निर्माणमा सरकार लागेको उल्लेख गर्नुहुँदै साना सुरुङ मार्ग निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
ऐतिहासिक स्थलको संरक्षणको अभियानमा लागेको प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक व्यक्तित्वका इतिहासलाई जीवन्त राख्न पनि काम गरेको उनले बताए ।
मन्त्री फुयाँलले एक सय चार वर्षअघि नै चुरियामाईमा निर्माण भएको सुरुङलाई सम्पदा स्थलका रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले काम थालिसकेको उल्लेख गर्दै आगामी वैशाख १ गते त्यसको उद्घाटन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले छोटो समयमा नेपाल एकीकरण गर्न सफल हुनुभएका बहादुर शाहले काम अनुसारका इतिहासमा चर्चा नपाएको तथा षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरिएकामा सालिक निर्माणले न्याय दिएको बताए ।
नेपाल ट्रष्टको जग्गामा सालिकसहित उद्यान निर्माण भएको छ । सालिक र उद्यानको रेखदेखका लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले माली व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
गोकर्णेश्वर–७ का वडाध्यक्ष केशव गुरुङले सालिक र उद्यान क्षेत्रलाई रमणीय स्थलका रुपमा विकास गरिने बताए । नेपाल ट्रष्टसँग सालिक निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सल्लाहकार उत्तम पुडासैनीले नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा एवं पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म पु¥याउन बहादुर शाहको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरे ।
शाहको पूर्णकदको सालिक मूर्तिकार राजु तुलाधरले निर्माण गर्नुभएको हो । बहादुर शाह सालिक स्थापना तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष नानीकाजी गिरीले पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काँगडा, उत्तरमा मानसरोवर, दक्षिणमा भागीरथीसम्म सीमा पु¥याउने ऐतिहासिक व्यक्तित्वको योगदानको सम्झनामा निर्माण भएको सालिक सम्भवत ः नेपालमै पहिलो हुनसक्ने जानकारी गराए ।
सालिक निर्माणका क्रममा अन्यत्र कतै बहादुर शाहको सालिक छ कि भनेर खोजी गर्दा नभेटिएको उनले बताए ।
नेपाली सेनाको बिस्तारमा लाग्नुभएका बहादुर शाहले गण, गुल्म गरी १०० वटा समूह निर्माण गर्नुभएको उहाँको भनाइ थियो । विसं १८२४ असार १४ गते शाहको निधन भएकामा सबै इतिहासकार एकमत रहेपनि हत्याको तरिकाका बारेमा भने उनीहरुकाे मत फरक छ ।
बहादुर शाहको सालिक निर्माण अभियानको नेतृत्व गर्नुभएका मन्त्री फुयाँलले एकीकरण अभियानका ऐतिहासिक पात्र विसे नगर्चीको सालिक पनि वाग्मती प्रदेशका कुनै स्थानमा बनाउने तयारी भएको जानकारी गराए ।